ပန်းပွင့်သတို့သမီး - May King - Wattpad
158K Reads 9.1K Votes 25 Part Story
By MayKing7 Ongoing - Updated Aug 27, 2017
flower Bride- Written By - May King
Get notified when ပန်းပွင့်သတို့သမီး is updated
မုန်တိုင်းများ၏အရှင်သခင် Season - 1
120K 7.1K 55
တာတာအရိုင်းစိုင်းများကြောင့် ပျက်သုဉ်းခဲ့ရတဲ့ နှင်းမြို့တော်။
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ နှင်းမြို့တော်က မင်းသားလေး ကမာအာဇမာန်ကို ကယ်တင်ခဲ့မိတဲ့ မွန်ဂိုပြည်ရဲ့ အကျော်အမော်စစ်သူကြီး တင်တက်ရင်။
ကျေးဇူးတရားကို အသက်ပေးပြီး ချက်ချင်းပြန်ဆပ်တဲ့ နှင်းမြို့တော်က မင်းသားငယ်လေးကို ညီငယ်အဖြစ်မွေးစားရင်း အဖြူရောင် ချစ်ခြင်းတွေက ဘယ်လိုအရောင်ပြောင်းခဲ့မလဲ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှပတင့်တယ်လာတဲ့ နှင်းမြို့တော်က မင်းသားလေးကို မွန်ဂိုဘုရင်ကြီးက တွေ့ပြီး အချစ်နတ်ပူးတဲ့အချိန်မှာ စစ်သူကြီးရဲ့ အချစ်တွေ ဘယ်လိုပေါက်ကွဲထွက်ခဲ့မလဲ။
ကျေးဇူးရှင်နောင်တော်တွေရဲ့ အသက်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို စတေးခဲ့တဲ့ ကမာအာဇမာန်ကို စစ်သူကြီး တင်တက်ရင်က ဘယ်လိုပြန်ကယ်တင်ပြီး ချစ်သူကိုရင်ခွင်ထဲအရောက်ပြန်သိမ်းပိုက်မလဲ ဆိုတာကို 'မုန်တိုင်
71.2K 6.8K 669
93.4K 9.4K 1.5K
ဘဝ ဆိုတာ  စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပြီး  အဲဒီ စာအုပ်ပေါ်မှာရေးထား သမျှတွေဟာ ကောင်းကင်ဘုံမှာ ရှိတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြဋ္ဌာန်းပြီးသားဖြစ်တယ်.... ဒါကြောင့် တစ်ချို့ကိစ္စတွေဟာ ဘယ်လို ကြိုးစားကြိုးစား ပြောင်းလဲပစ်လို့ မရဘူး
ဘုရင့်နောင်ဟာ ၁၅၆၃-၁၅၆၄ မှာ အယုဒ္ဓယကို  စစ်ချီပြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်..
၁၅၇၁ မှာတော့ အဲဒီတုန်းက ဓားစာခံအဖြစ်ခေါ်လာခဲ့တဲ့ အယုဒ္ဓယ မင်းသား နရဲစွမ်ကို သူ့ပြည် ပြန်ပို့ပြီး အလဲအလှယ် အဖြစ် သမီးတော် ဆုပန်ကလျာကို မိဖုရားအဖြစ် ပြန်ပို့စေခဲ့ပါတယ်...
ဒီ ဝတ္ထုက အဲဒီ အချိန်လေးကို နောက်ခံယူပြီး ရေးထားတာပါ..
သမိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ လာမငြင်းခုန်ဖို့ တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်.. ??????
44.4K 4.3K 245
103K 13.2K 1.5K
BL တွေ ဖတ်ရတာ အရမ်းကြိုက်တဲ့ fudanshi လေး, အသက်ကတော့ ၂၁, မိဘမဲ့ပေမယ့် အထင်မသေးနဲ့ ဘွဲ့ရပြီးသား... အလုပ်ကလည်း ၂ ခုတောင်နော်...ပညာတတ်၊ ရုပ်ချော အဟွတ် လူချောလေး ဖုန်းမင်...
စိတ်ထားလေး လှပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပြာကလက်စိန် အကျင့်ကြောင့် accident တစ်ခုနဲ့ အသက် ၂၁ အရွယ်မှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်...သူသေပြီးတဲ့အခါမှာ သူ အရမ်းကြိုက်တဲ့ BL series ထဲမှာ လူဝင်စားခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ လူဝင်စားခွင့် ရခဲ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပိုင်ရှင်က.........
66.8K 6.3K 420
121K 7.2K 280
မုန်တိုင်းများ၏အရှင်သခင်Season (2)အပိုင်း (5...
3.8K 138 11
18K 1.3K 89
ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း-ငါ မယုံနိုင်ဘူး။ လောကကြီးကို နားမလည်တော့ဘူး။ ငါဟာ နာမည်မရှိ၊ အသုံးမကျ၊ ပုံပျက်ပန်းပျက် မွေးဖွားလာသူ တစ်ယောက်။
ငါ့အဖေအတွက်တော့ ငါဟာ ဒီကမ္ဘာပေါ်ကို ရောက်မလာသင့်တဲ့ လူသားတစ်ယောက်။ နိမ့်ကိတဲ့ အစေခံတစ်ယောက်က မွေးတဲ့သား ငါ့ကြောင့် အဖေ့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ဇနီးက သူ့ကို မုန်းတီးခဲ့တယ်။
သူ့ရဲ့ ချစ်သူနဲ့ ခိုးရာလိုက်ပြေးတဲ့ အစ်မကိုယ်စား ဧကရာဇ်ရဲ့ မိဖုရားခေါင်အဖြစ် အစားထိုးခံရတဲ့ အချိန်အထိ ငါဟာ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေခဲ့တယ်။ စစ်သူကြီးရဲ့ မျိုးရိုးကိုးဆက်လုံး သေဒဏ်ပေးခံရမယ့် အပြစ်။ ငါ့ကို လွှဲချခဲ့တယ်။ "မင်းရဲ့ လောဘကြောင့် ဒီလိုလုပ်တာပါ" လို့ ပြောလိုက်။ ရက်စက်တယ်။ ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်။
အစ်မ နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ငါ့ကို ရွေးချယ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို နားမလည်ဘူး။ သူတို့ ပြောစကားကို ကြားခဲ့ရတယ်။ "ဒီနည်းနဲ